Khatka Kenya: Beeralayda Khatka oo fikir cusub helay kaddib markii ay ka quusteen Soomaaliya | Radio Hormuud
BBC-da oo booqatay magaalada Meru oo ah halka uu ka baxo qaadka ugu badan ee laga dhoofiyo dalka Kenya.
khaatka waa isha ugu muhiimsan ee dakhliga dadka deegaankaasi, balse khilaaf diblomaasiyadeed - xayiraadaha uu sababay Covid - 19 ayaa sababtay in beeraleyda aysan khaadkooda u dhoofin karin dalka Soomaaliya, halkaas oo dalagga ugu badan loo dhoofin jiray. Sidoo kale waxaa horaan looga mamnuucay Ingiriiska iyo dalal badan oo Yurub ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Loyce Gatwiri, waxay sanadkii la soo dhaafay weysay shaqadeedii macalinimada cudurka korona awgiis, waxayna go'aansatay inay dib ugu laabato tuuladii ay ka soo jeeday si uga mid noqoto 3,000 oo beeraley ah oo u weecday beerashada gabbaldayaha.
"Gabaldayuhu wuxuu faa'iido weyn ugu fadhiyaa bulshada beeratay. Xilli roobaadkii hore, qaadka dalka banaankiisa lama geyn karin, sidaasi darted haddii aad wada beeratid qaadka iyo galabdayaha, qaadkana lacag laga heli waayo, xilligaas waxa aad fursad u heysataa in aad lacag ka samaysid gabaldayahao." Ayey tiri Loyce.
"Marar badan, waxay beertaan galley, balse xilliyada kala wareega, roobab aan kala go 'lahayn, iyo guud ahaan isbeddel dhanka cimilada. Marka waxaan isku dayeynay inaan kala hadalno dalagyada beddelka ah ee aan keeni karno. Markaa waxaan ogaanay in ubaxa uu sifiican halkan ugu shaqeeynaayo." Ayuu yiri Loyce."
"Waxaan u maleynayaa inay arkeen suuq damaanad qaad u ah wax soo saarka. Waxaan ku dhahnay waanu damaanad qaadaynaa suuqa aad u baahantihiin inaad heshaan. Waxaan siineynaa qandaraasyo bilow ah. Ciddii dooneysa qoraal ahaan ayaan ku siineynaa, balse marka hore waxay u baahan yihiin caddeyn dhab ah si loo ogaado inaad wax iibsaneyso, taasina waxay noqotay mowqifkeena. Waxaan damaanad qaadnaa qiimaha ka hor intaanay beerin" Ayuu yiri Vimal Shah oo ah Gudoomiyaha shirkadda Bidco Afrika.
Waxaana laga yaaba in baahidaas ay kor u sii kacdo gaar ahaan inta uu jiro cudurka safmarka ee Covid 19, sida ay sheegeen ururka caalamiga Euromonitor.